Alopecia (ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ထိပ်ပြောင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Alopecia (ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ထိပ်ပြောင်ခြင်း)
Alopecia (ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ထိပ်ပြောင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ထိပ်ပြောင်ခြင်း ဆိုတာဟာ ပေါက်လာတဲ့ ဆံပင်ပမာဏ ထက် ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ပိုများတဲ့ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့လူတွေမှာ ဆိုလျှင် ဆံပင်ပြန်မပေါက်တော့ဘဲ ထိပ်ပြောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ပျမ်းမျှအားဖြင့် သင်ဟာ တစ်နေ့လျှင် ဆံပင် ၂၅ ပင် မှ အပင် ၁၀၀ ထိ ကျွတ်နေပါတယ်။ alopecia ကတော့ တစ်နေ့ကို အပင် ၁၀၀ မကပဲ ကျွတ်နေပါတယ်။ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ထိပ်ပြောင်ခြင်း (၃) မျိုးရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့မှာ
Alopecia areata – ဆံပင် အကွက်လိုက် ကျွတ်ခြင်း
Alopecia totalis – ဦးရေပြား ဆံပင်အကုန်လုံး ကျွတ်ခြင်း
Alopecia universalis – တစ်ကိုယ်လုံးရှိ အမွေးများ အလုံးစုံ ကျွတ်ခြင်း တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဖြစ်ပွားမှု အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီး ဒီရောဂါ အခြေအနေဟာ ယာယီ သို့ အချိန်အကြာကြီးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ထိပ်ပြောင်ခြင်း က စိတ်ဖိစီးစေနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် တခြား ပုန်းအောင်းနေတဲ့ ရောဂါတစ်ခုခုရဲ့ လက္ခဏာအနေနဲ့ လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်အခြေအနေ မသက်သာလျှင် သို့ ပိုဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Alopecia (ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ထိပ်ပြောင်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ထိပ်ပြောင်ခြင်း က ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ ကလေး၊ လူကြီးမရွေး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တချို့လူတွေမှာ ကြီးမားတဲ့ ဘဝဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဥပမာ ရောဂါရခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း နှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေ ကြောင့်လဲ ဆံပင်ကျွတ်တတ်ပါတယ်။
အမျိုးသားတွေမှာ အသက် ၅၀ ကျော်လျှင် ဖြစ်တတ်ပြီ အမျိုးသမီးတွေမှာလည်း အသက် ၅၀ နောက် သွေးဆုံးပြီါ်အချိန်မှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Alopecia (ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ထိပ်ပြောင်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဖြစ်ပွားမှု အကြောင်းအရာများအပေါ်မူတည်ပြီး ဒီရောဂါ က လက္ခဏာတွေ ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ ရုတ်တရက် သို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖြစ်လာနိုင်သလို ယာယီ သို့ ရာသက်ပန်လည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။၎င်းက ဦးရေပြားသာမက တစ်ကိုယ်လုံးကို ပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါတို့မှာ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ထိပ်ပြောင်ခြင်း ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာအချို့ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
တစ်နေ့ကို ဆံပင် အပင် ၁၀၀ အထက် ကျွတ်ခြင်း
တစ်ခါတရံ ပူခြင်း သို့ ယားခြင်းကို ခံစားရခြင်း
ဆံပင်ကျွတ်သွားတဲ့ အကွက်တွေက ပုံမှန်အားဖြင့် ချောမွေ့တယ်၊ အဝိုင်းပုံရှိတယ်၊ ပြီးတော့ မက်မွန်သီးရောင် ရှိတတ်ပါတယ်။
– ဆံပင် အကွက်လိုက် ကျွတ်ခြင်း။ ။ သူ့မှာတော့ အကွက်တွေက အဝိုင်းပုံ ရှိကြပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ဦးရေပြား ဆံပင်မွေးတွေသာ ကျွတ်တတ်သော်လည်း တစ်ခါတရံ မုတ်ဆိတ်မွေး သို့ မျက်ခုံးမွေးတွေပါ ပါဝင်တတ်ပါတယ်။
ဦးရေပြား ဆံပင်အကုန်လုံး ကျွတ်ခြင်း။ ။ ဆံပင်တွေက ဆံပင်ဖြီးတဲ့ အချိန်မှာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ကျွတ်ကျလာပါတယ်။ ဒီလို ဆံပင်ကျွတ်ပုံမျိုးမှာ ဆံပင်ပါးခြင်းလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ကိုယ်လုံးရှိ အမွေးများ အလုံးစုံ ကျွတ်ခြင်း ။ ။ ကင်ဆာဆေးပေးခြင်းကြောင့် ဆံပင်ကျွတ်နိုင်ပါတယ် သို့သော် ဆေးရပ်ပြီးနောက် ပြန်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါ အကြောင်းအရာများရှိလျှင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆက်သွယ်ပါ။
သင့်ရောဂါ အခြေအနေ တိုးတက်မှု မရှိဘဲ ပိုဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသင့်ပါတယ်။ ရုတ်တရက် ဖြစ်တဲ့ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ထိပ်ပြောင်ခြင်း ကတော့ ကုသမှုလိုအပ်တဲ့ ပုန်းကွယ်နေတဲ့ ရောဂါအခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် ကုသမှု နည်းလမ်းကို ရှာနေတာထက် ဖြစ်ပွားမှု အကြောင်းအရင်းကို အရင် ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ သင်ခေါင်းလျှော်စဉ် သို့ ခေါင်းဖြီးစဉ် ဆံပင်ပို ကျွတ်လာလျှင် ဆရာဝန်နှင့် ပြသင့်ပါတယ်။
Alopecia (ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ထိပ်ပြောင်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဒီရောဂါကို ဖြစ်စေတဲ့ တိကျတဲ့ အကြောင်းရယ်လို့တော့ မသိရသေးပါ။ သို့သော် ဆေးပညာရှင် အများစုကတော့ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ထိပ်ပြောင်ခြင်း က အောက်ပါအကြောင်းအရာတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
မိသားစု ရာဇဝင်။ ။ သင့် မိသားစုဆွေမျိုးထဲမှာ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ထိပ်ပြောင်ခြင်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးလျှင် သင်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။ မိသားစု ရာဇဝင် ရှိတာဟာ သင့်မှာ ဘယ်အရွယ် ဒီပြဿနာ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်သလို ဘယ်လို အခြေအနေထိ ပြောင်းလဲမှု ရှိနိုင်လဲ ဆိုတာပါ သိနိုင်ပါတယ်။
ဟော်မုန်း။ ။ ဟော်မုန်း ပြောင်းလဲ ခြင်းနှင့် မမျှတခြင်းတို့ကြောင့် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ထိပ်ပြောင်ခြင်း ကို ယာယီ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုတွေမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၊ ကလေးမွေးချိန်နှင့် သွေးဆုံးချိန်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ဂလင်း ကလဲ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ထိပ်ပြောင်ခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အရေပြား အခြေအနေ။ ။ ဦးရေပြားရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ အရေပြားလေးဖက်နာ၊ lichen planus တို့ကြောင့်လဲ ဆံပင်ကျွတ်တတ်ပါတယ်။
ဆံပင်နှုတ်ခြင်း ရောဂါ။ ။ trichotillomania လို့လဲ သိရတဲ့ ဒီရောဂါအခြေအနေက လူကို ဦးရေပြားဆံပင်မွှေး၊ မျက်ခုံး နှင့် တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေက အမွှေးတွေကို နှုတ်ချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
Alopecia (ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ထိပ်ပြောင်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ထိပ်ပြောင်ခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
မိသားစု ရာဇဝင်။ ။ ဒီ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ထိပ်ပြောင်ခြင်း ဖြစ်ဖူးတဲ့ မိသားစုဝင်ရှိလျှင် သင်လဲ ဒီပြဿနာ ဖြစ်နိုင်ချေ အလွန်များပါတယ်။
အသက်အရွယ်။ ။ အသက်ကြီးလာလေ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ထိပ်ပြောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေ များလေ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဟာရ ချို့တဲ့ခြင်း။ ။ လုံလောက်တဲ့ အာဟာရအရရှိလျှင် သင့် ဆံပင်တွေက ကြွပ်ဆတ်ပြီး ကျွတ်ထွက်လာတတ်ပါတယ်။
တချို့ရောဂါတွေကြောင့်လဲ ဆံပင်ကျွတ်တတ်ပါတယ် ဥပမာ ဆီးချိုသွေးချို၊ အရေပြားလေးဖက်နာ
Alopecia (ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ထိပ်ပြောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်က သင့်မိသားစု ကျန်းမာရေး ရာဇဝင်နှင့် တခြားဓါတ်ခွဲ စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ပြီး ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ထိပ်ပြောင်ခြင်း ဟုတ်မဟုတ် အတည်ပြု အဖြေရှာနိုင်ပါတယ်။
သွေးစစ်ခြင်း။ ။ သွေးစစ်ခြင်းဖြင့် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း အကြောင်းအရင်းကို သိနိုင်ပါတယ် ဥပမာ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းပြဿနာများ
ဦးရေပြား အသားစ စစ်ဆေးခြင်း။ ။ ဆရာဝန်က ဦးရေပြားအသားစ နဲ့ ဆံပင်မွှေးတို့ကို စစ်ဆေးဖို့ ယူဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Alopecia (ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ထိပ်ပြောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဒီပြဿနာ ကို ကုသရာမှာ ဆေးပေးခြင်း၊ ခွဲစိတ်ခြင်း၊ လေဆာကုထုံး၊ သို့ ဆံပင်အတုအုပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်ရရှိစေရန် ကုထုံး တစ်ခုချင်း သို့ စုပေါင်းကုသခြင်းတွေ အတွက် ရက်ချိန်းတွေခေါ်ပြီး ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။
ဆေးဝါးဖြင့် ကုသနည်း။ ။ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းအား ကုသသည့် ဆေး၂ မျိုးမှာ minoxidil ( Rogaine) နှင့် finasteride ( Propecia) တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။Minoxidil ကတော့ အရည် သို့ အမြုပ် ပုံစံနဲ့ လာပါတယ်။ Minoxidil က ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး ဆံပင်လဲ ပြန်ပေါက်စေနိုင်ပါတယ်။ finasteride ကတော့ သောက်ဆေးဖြစ်ပြီး အမျိုးသားတွေမှာ သာ ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
ခွဲစိတ်ကုသနည်း။ ။သင့်မှာ ရာသက်ပန် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းဖြစ်နေလျှင် ဆရာဝန်တွေက ခွဲစိတ်ဖို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ဦးရေပြားမှာ ဆံပင်ပြန်စိုက်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီနည်းက ဈေးကြီးပြီး နာကျင်စေနိုင်ပါတယ်။
လေဆာဖြင့် ကုသခြင်း။ ။ လေဆာကုထုံးကလဲ လူနာတွေကို ဆံပင်ကျွတ်တာကို လျော့နည်းစေပြီး ဆံပင်ပြန်ပေါက်အောင်လည်း ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆံပင်တု စွပ်ခြင်း။ ။တခြား ကုသနည်းတွေ အလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုလျှင် ဆံပင်တုစွပ်ထားခြင်းက စိတ်ချ လုံခြုံစေနိုင်ပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ထိပ်ပြောင်ခြင်း ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ထိပ်ပြောင်ခြင်း ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ဆံပင်ကို လျှော်လျှင် သို့ ဖြီးသင်လျှင် ညင်သာပါစေ။
ကျပ်စည်းနေတဲ့ ဆံပင်ပုံစံများ ဖြစ်တဲ့ ကျစ်ဆံမြီး၊ငါးရိုးဆံပင်ပုံစံကျစ်ခြင်းတို့ကို ရှောင်ပါ။
အာဟာရညီမျှတဲ့ အစားအစာကို စားပါ။
ဆံပင်လိမ်ခြင်း၊ ဆွဲခြင်း တို့ကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ဆံပင်ဖြီးလျှင် အသွားကျဲတဲ့ ဘီးကို သုံးပါ။ ဆံပင်ရေစိုနေသေးလျှင် ခေါင်းမဖြီးသေးပါနဲ့။
ဆံပင်ပေါင်းဆေးသုံးပေးခြင်းဖြင့် ခေါင်းဖြီးခြင်းကို လွယ်ကူစေပါတယ်။
စတီးရွိုက်ဆေး တွေ သုံးပြီး ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပြလာလျှင်ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။ ၎င်းတို့မှာ နီခြင်း၊ ရောင်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း နှင့် ဆေးထိုးသည့်နေရာမှ နာခြင်းတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
Hello Health Group သည် ဆေးပညာ အကြံပေးချက်များ၊ ရောဂါ စစ်ဆေးအတည်ပြုချက်များနှင့် ကုသမှုများ မပြုလုပ်ပေးပါ။
Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012. Print edition. Page 69
Alopecia areata. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001450.htm. Assessed Jul 11 2016
Hair loss. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hair- loss/basics/tests-diagnosis/con- 20027666.
Assessed Jul 11 2016
Hair loss. http://www.nhs.uk/conditions/Hair-loss/Pages/Introduction.aspx. Assessed Jul 11 2016Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012. Print edition. Page 69
Hair loss. http://www.nhs.uk/conditions/Hair-loss/Pages/Introduction.aspx. Assessed Jul 11 2016
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုင် 3, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း အောက်တိုဘာ 11, 2017